Tima-bannaanida Michelle Obama oo la hadal hayo - BBC News Somali
Tima-bannaanida Michelle Obama oo la hadal hayo
Dad badana ayaa kaftan ka dhiganayey arrinta Michele Obama iyo hagoogteeda ama timaheeda Qaawan . Hore ayaa Riisul wasaaradda Jarmalku Angela Merkel oo timo qaawani sucuudiga u tagay.
Waxaa kaloo warbaahinta dalka Maraykanku ay hadda qorayaan, Michelle Obama, xubnaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ma gacan qaadin. Taasoo sida cad la xiriirta diinta Islaamka oo dhiirigalisa in ragga iyo dumarka ajnabiga kala ah aysan sidaa yeelin. Balse, waxaa muuqata in tani muujinayso kala duwanaanshaha dhinaca dhaqanka ee Carabta ama Islaamka iyo reer galbeedka.